အခမဲ့များအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » မက်ဆေ့ခ်ျ
မက်ဆေ့ခ်ျ APK ကို
မက်ဆေ့ခ်ျကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့၏ဟောင်းနွမ်းပြည်နယ်တစ်ခုဆတ်လှပတုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းဒီဇိုင်းထိတတ်၏။ ဖောင်းနှင့်ကြော်ငြာများနှင့်တှကေိုဖယျရှားရှုပ်ထွေး SMS နဲ့ MMS ကို apps များနှင့်အတူကမ္ဘာ၌, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားရဖို့တစ်ခုခုပါပဲ။ အကြှနျုပျတို့သညျကခစျြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ကျနော်တို့စာပို့မှော် again.Here ရဲ့အောင်နေ
•ပစ္စည်းဒီဇိုင်း: ထိုသို့အများကြီး။ မက်ဆေ့ခ်ျများမရရှိနိုင်အလှဆုံးစာသားကိုတမန်ဖြစ်၏
• Themes: အမရရှိနိုင်ပါကသူတို့ကိုနီးပါး 200 ။ အဆိုပါပစ္စည်းဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များအတွက် Google ကကောက်ယူတစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း, လက်
•ည Mode ကို: ကဲ့သို့ပင်မှောင်မိုက် themes များရှိသည်ဖို့? ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်, ဒါမှမဟုတ်အလိုအလျောက်ည Mode ကိုဖွင့်နှင့်ညဉ့် mode ကိုရှိမိုက်မဲထွက်မယ့်အခါ, အလိုအလျှောက်ပေါ်လှည့်။
• Customization: ဒါဟာသင့်ရဲ့ app ကိုဖွင့်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့လုပ်ပါ!
•မက်ဆေ့ခ်ျများ Reply: သင်လုပ်နေလုပ်နေအဘယ်အရာကိုစွန့်ခွာရန်မလိုဘဲမက်ဆေ့ခ်ျမှ Reply
• Group မှ Messaging ကို: ဒါသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့ကိုပြောပြ!
• MMS ကို: စကားလုံးများကိုရုံမလုံလောကျသညျ့အခါသည်
•နှောင့်နှေး Messaging ကို: သင်ပြောလိုဆိုပါတယ်သေချာအောင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်စက္ကန့် Give!
•ရှာရန်: သင့်မက်ဆေ့ခ်ျဂရုစိုက်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သင့်သည်။ အခုဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်သည်
•လုံခြုံရေး: မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ Stagefright MMS ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ထားသည် Android ပေါ်မှာအမြတ်ထုတ်
•လုံးဝအခမဲ့: ကျနော်တို့သည်လည်းသင်တို့အပို features တွေအတွက်ပေးချေရန်ရှိသည်ဖြစ်စေမလိုချင်ကြဘူး!
•အခြားတစ်စုံတစ်ရာသင်လိုချင်သော: ကျနော်တို့နေ့တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်အလုပ်မလုပ်, ကြှနျုပျတို့အမြဲတုံ့ပြန်ချက်ကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေ!
9.23 ကို MB